Calculator ကို - အခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Calculator ကို - အခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက်, Multi ဂဏန်းတွက်စက် app ကို
Calculator ကို - အခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက်, Multi ဂဏန်းတွက်စက် app ကို APK ကို
Android အတွက်ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာ Calculator ကို - ငါ Alcatel Calculator ကိုဖြစ်၏။ ငါ, သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်ထက်အများကြီးပိုကောင်းအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လှလှပပဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
ငါသည်သင်တို့ကိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကယ်တင်ကူညီပေးပါမည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတွက်ချက်အရာအားလုံးကိုသတိရ, ဒါကြောင့်နောက်ကျောကိုကြည့် ယူ. နောက်တဖန်သမိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ သငျသညျဝယ်ယူမှုဖြစ်စေလျက်, အိမ်စာပြုဘဏ္ဍာရေးတွက်ချက်နှင့်အခွန်တွက်ချက်ဖို့ကျွန်မကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ဂဏန်းတွက်စက်နုတ်ထွက်နှင့်အခြားသောအရာတို့ကိုပြုလျှင်သင်တို့ကိုပြန်ရောက်လာသောအခါ, ကကဒီမှာပါသေးရဲ့။ သငျသညျနှစ်ကြိမ်ထပ်တူညီတဲ့တွက်ချက်မှုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပေ။
အစဉ်မပြတ်ငါဖြစ်ပျက်သင်ပြောပြ - - သင်တွက်ချက်နေကြသည်ဘယ်မှာသင်ကဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်
- သင်ကချိုးယူ, ပြီးတော့ပြန်လာပြီးသင်ထားခဲ့ရှိရာဆက်လက်နိုင်အောင်ငါအရာအားလုံးကိုသတိရ
- ငါဖတ်ပါရန်နှင့်ကော်မာဖြစ်သင့်ဘယ်မှာလွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ကြော့ဖောင့်၌သင်တို့၏တွက်ချက်မှုကိုပြသ
- သင်ကျော်စတင်ရန်မဟုတ်, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအမှားပြင်ပေးဖို့မည်သည့်အချိန်တွင်နောက်ပြန်ခလုတ်ကိုသုံးနိုငျ
- ငါ့ရာခိုင်နှုန်းသော့ချက်ကမအတိအကျဘာကိုပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်သင်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
- သင်္ချာ advanced နိုင်ပါသည် function ကိုကွေး၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
- သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်နေ့စဉ်တွက်ချက်မှုလုပ်နိုင်အောင်ငါကအရမ်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းကို
Alcatel Calculator ကိုနှင့်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို, သင့်လက်ကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရစေကြပါစို့
အထွေထွေ Calculator ကို
* / လေးခုအခြေခံဂဏန်းသင်္ချာစစ်ဆင်ရေး - + ကိုထောက်ပံ့။
ထိုကဲ့သို့သော, trigonometric လော်ဂရစ်သမ်နှင့်အဆလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆင်ရေးလုပ်ပါ။
ပံ့ပိုးမှုအရှည်, အလေးချိန်, အကျယ်, volume အပူချိန်, လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့်အစားအစာယူနစ်ပြောင်းလဲခြင်း။
180 ငွေကြေးကျော်ဒေါ်လာစျေး, ယူရို, ယန်း, ယွမ်, စတာတွေအပါအဝင်ရှိသမျှသောလောကီ, ထောက်ခံပါတယ်
ပြုပြင်ရေးဒဿမအမှတ် display ကိုအမှားနှင့်အခြားကိစ္စများ
Calculator ကို - အခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက်, Multi ဂဏန်းတွက်စက် app ကို